Mareykanka & Dowladda oo ka hadley duqeyn laga fuliyey Gobolka Baay – Radio Baidoa
Mareykanka & Dowladda oo ka hadley duqeyn laga fuliyey Gobolka Baay
War-saxaafadeed ka soo baxay taliska Ciidamada Maraykanka ee qaarada Afrika ee loo yaqaano (AFRICOM) ayaa lagu faah faahiyey duqeyn dhinaca cirka ah oo uu Mareykanka ka fuliyey deegaan ka tirsan Gobolka Baay.
Qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in Ciidamada Mareykanka oo kaashanaya Saaxiibadooda Soomaaliya ay 27-kii Bishaan duqeyn dhinaca cirka ah ka fuliyeen deegaanka Buula fuulaay oo ka tirsan gobolka baay ,isla markaana ay la beegsadeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Weerarkaas ayaa Mareykanka waxa uu sheegay inay ku dileen laba Xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab,sidoo kalena ay ku taageerayeen Ciidamada Dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jira Ururka Al-Shabaab,sida uu sheegay kuxigeenka agaasimaha howlgalada, Taliska Mareykanka ee Afrika Janeraal Miguel Castellanos.
Sidoo kale mareykanka ayaa sheegay in qiimeyn ay sameeyeen lagu ogaadey in dad raid ah aysan wax ku noqon duqeyntaas ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan Gobolka Baay ee maamulka Koonfur Galbeed.
Al-Shabaab oo dhankooda ka hadley duqeyntaas ayaa waxaa ays heegeen in laba Gantaal ay deegaanka Buula Fuulaay ku garaacdey mid kamid ah diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Mareykanka,isla markaana ay ku dhinteen laba Qof oo Shacab ah.
War-Saxaafadeed dowladda Soomaaliya dhankooda kasoo baxey oo looga hadley duqeyntaas ayaa waxaa lagu sheegay in lala beegsadey Xarumo Al-Shabaab,isla markaana looga diley laba Xubnood.
Soomaali ku xayiran Libya & dowladda oo ka hadashay